သံမဏိသံမဏိကွင်းဆက်ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ စက်ရုံ - လျှော့ချသူများ၊ တီကောင်များ၊ တီကောင်ဂီယာအုံများ၊ ဂြိုလ်ဂီယာအုံများ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များ၊
4 ပင်လယ်, 2021
Viking Chains Group ၏စုစည်းမှုကို
Connexus Industries သည် VC အမှတ်တံဆိပ်သံမဏိချည်နှောင်ခြင်းကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ VC ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်အလွန်ကောင်းသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နေ့စဉ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများစွာကိုပြုလုပ်သည်။ ဤသည်ထိရောက်သောအမှတ်တံဆိပ်လာမည့်ပါဝင်ပါသည်:
? ပြီးပြည့်စုံသောစာနယ်ဇင်းပွဲစဉ် rivets
? စင်ပြိုင် Sidebar တွင်း
? “ True-Fit” အတွက်စင်ပြိုင်အပေါက်များ
? အပြည့်အဝစာနယ်ဇင်းပွဲစဉ် rivets
နှစ်ဆအရှည် INFEEDED ချည်နှောင်ခြင်း, စကင်နာချည်နှောင်ခြင်း၊ ပျံသန်းခြင်း၊ ကြယ်ပွင့်များနှင့်အိပ်ယာခင်းများ
? အထူးမြင့်မားသောမြန်နှုန်း၊ သက်ရောက်မှု application များကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်တည်ဆောက်ထားသည်
? စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင် 25 ပေါင်းနှစ်ပေါင်း
? တိုးချဲ့ပံ့ပိုးမှုတည်ရှိသကြားစက် application အတွက်ဒီဇိုင်း
? အပူကုသ Stainless ရရှိနိုင်သောသံမဏိ၊ Hard Chrome ရွေးချယ်စရာများ
I'Anco Cast သတ္တုစပ်သံမဏိနှင့် Hadfield မန်းဂနိစ်စတီးစက်ရုံများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်သစ်သားပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများအတွက်အများဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်အမင်း ၀ တ်စားဆင်ယင်မှု၊ ကြီးမားသောဆန့်သောဝန်များနှင့်အစွန်းရောက်သောသက်ရောက်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်ချိတ်ဆက်မှု၏အဓိကကျသောတွဲဖက်ထားသည့်ပစ္စည်းများအားဂဟေဆော်ခြင်းအားဖြင့်အပူထိခိုက်သောဇုန်များဖန်တီးရန်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုမဆိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သို့သော်ပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူ weldable ဖြစ်ကြသည်ထုံးစံပူးတွဲမှုအဘို့အမြန် turnaround ကြိမ်ခွင့်ပြု။ ကျွန်ုပ်တို့၏သွန်းထားသည့်ချိတ်များအားလုံးသည် ဦး ခေါင်းနှင့် rivet စွန်းပိုင်းများတွင် rivets ၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းများမှကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကြီးမားသောoverရိယာများ၌ဝန်များကိုဖြန့်ဝေရန်ပိုမိုကြီးမားသောbearingရိယာများပေါ်တွင်ချည်နှောင်ခြင်း၏ခိုင်မာအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကြီးမားသောကန့်လန့်ဖြတ်နယ်ပယ်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများသွန်းလောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။